Debian 9.0 waxaa loo magacaabi doonaa Zurg | Laga soo bilaabo Linux
Sida dad badani ogyihiin, noocyada Debian GNU / Linux Waxay qoreen magacyada jilayaasha Toy Story (isbarbar dhig hadii aan tixgalino in Steve Jobs uu ka dambeeyo filimkaan: D) markana waxay ahayd marki zurg, shar-xun-xun xun taariikhda 😀
Warku wuxuu ka imanayaa mid ka mid ah horumariyeyaasha Debian, Dimitri John Ledkov, oo sida muuqata ka mid ah dadka (ama qofka) ay tahay inuu ku sameeyo Taageerada Dhismeyaasha Badan KFreeBSD.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Debian 9.0 waxaa loo magacaabi doonaa Zurg
Waxaan had iyo jeer isweydiiyaa maxaa dhici doona markay magacyadu dhammaadaan? Sababtoo ah maahan inay koobi karayn.
Hagaag, waxaa jira filimo badan .. 😀
Ma ihi isticmaale debian laakiin waxaan rajeynayaa markaan arko Barbie markiisa… Debian Barbie xD
Debian GNU / Linux "Ken" xD
Wadar ahaan, haddii aan mar hore Jessie ku isticmaalayay buugayga xusuus-qorka, laga soo bilaabo 'cowgirl with braids' ilaa 'barbie' wax badan ma socdaan.
Tirus Junior dijo
hehe sidoo kale waan rajeynayaa 🙂
Ku jawaab Tirso Junior
jibbo 65 dijo
hubi inay sameyn doonaan cutubyo cusub oo ka mid ah waxyaabaha ay ku dari doonaan jilayaasha cusub xD
Ku jawaab pipo65
Waxaan rabaa in midkood la soo baxo magaca summada: «Skynet» 😀
Aakhiro ayaa soo socota !! 😀
Haddii aad i weydiiso waxaan jeclaan lahaa inaad yeelato magaca Atruyu ,. masduulaagii taariikhda aan dhamaadka lahayn
Waxaan u baxayaa inaan diido: Waxay ahayd kaftan hore Abriil Fools.
Kuma jecli adiga ¬_¬
LOL .. !! hada waxaad noqon kartaa wariye tabloid xD !! in kastoo sida horumariyahu yiraahdo .. waa magac aad u wanaagsan
hahahahaha waa meel walba!
Ku jawaab firefox-user-88
Ma waxaad dhaheysaa waa magaca ugu macquulsan ee aad leedahay, mise waxaad ka caajistay inaad ugu yeerto laanta aan xasillooneyn magaca 'SID' oo aad go'aansatay inaad ugu magac darto "ZURG" maxaa yeelay waxay si fiican ugu habboon tahay astaamaha laantaas Debian.
Uma maleynayo inay wax iska beddeleyso. Marka laga soo tago magaca wiilka oo leh nafta Jack the Ripper, waxaa jira kuwa sheegaya in magacani uu ka jawaabayo xarfaha wali ku jira horumarka (SID).
Ku jawaab emayvs
Hagaag, inkasta oo ay tahay wax is diidan, Magacyada Toy Story waxay ka yimaadeen markii Bruce Perens la wareegay Debian, oo ka shaqeyn jiray Pixar 😀
Louis medina dijo
Aniga aragtidayda waa magac weyn, laakiin runtu waxay tahay inaysan waligeed noqon doonin bos ha ha ha si fiican laga yaabee markay Debian baruurtaan, wax runta ka baxsan oo aan duulin ha ha ha
Ku jawaab Luis medina
Waxaa horey u jiray Debian Buzz; 1.1.
Way fiicnaan laheyd haddii taariikh u daato Debian 9
Maxay ? Haa, waxay lahaan doontaa baakado laga soo bilaabo xD da'da baraf ee ugu dambeeya
Waan ka helay 😀
Anigu ma ihi isticmaale Debian ah, laakiin markasta oo aan maqlo magacyadooda noocaas ah waxay i xasuusisay wax, illaa iyo hadda waan u dhacay! hahaha, intee in le'eg ayaad ka barataa bulshadaan?
xiiso leh, waad ku mahadsan tahay caarada
Miyay noqon doontaa midda rasmiga ah ee la socota Hurd? mise waligeen sugi doonaa? xD
Waxaan jeclaan lahaa inaan la xiriiro qof wax ka yaqaan Debian.
Waxaan isticmaali jiray Debian 7.4 Stable muddo laba bilood ah oo keliya, waxayna ku imaaneysaa qaab ahaan qaababka loo yaqaan 'Python versions' 2.7 iyo 3.2, oo labaduba si wada jir ah u wada nool dhibaato la'aan. Waxaan aad u xiiseynayaa inaan awoodo inaan isticmaalo Python 3.3.3 ama 3.3.4 maxaa yeelay kaliya noocyadaas waxaad ku bilaabi kartaa isticmaalka "venv" (Waan ogahay virtualenv, laakiin fekerkeygu waa inaan isku dayaa "venv"). Waxay ii sheegaan inaan dhibaato kala kulmi karo rakibideeda, iyo inaan ka soo qabto Sidka ama meelaha wax lagu keydiyo ee tijaabada ah, inaan soo dejiyo asalka oo aan soo ururiyo….
Waxaa iga batay shaki, fikrado badan oo cusub oo aan ku biiriyo iyo waqti aad u yar. Fadlan, haddii qof i caawin karo, ii soo sheeg.
Aad baad ugu mahadsantahay dareenkaaga.
Abuur Koodhadh gaaban oo loogu talagalay mawduucayada 'Wordpress'
KPhotoAlbum: Ku abaabulo sawiradaada iyo fiidiyowyada hal codsi